I-Apartment 102-Ecaleni kwesikhululo seenqwelomoya - I-Airbnb
I-Apartment 102-Ecaleni kwesikhululo seenqwelomoya
Águas Belas, Paraná, Brazil
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAnna Carolina
Ifulethi lonke; Ifakwe ngokupheleleyo kwaye ikhululekile, kunye negaraji ngaphakathi kwekhondom, izolile kwaye ithe cwaka; Inketho enkulu yokuphumla kunye nefulethi elikhethekileyo kwindawo yakho yokuhlala! Zonke ingcinga ngenkathalo ukuba uzive usekhaya! Kufuphi nesikhululo seenqwelomoya(5min); iimarike, iikhemesti, ukutya okukhawulezayo, ukuthenga ngemizuzu emi-5 ngeenyawo; Ukuguquguquka kweeshedyuli!
Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwindawo yokupaka, i-inshorensi, kunye nomntu ngamnye. I-condominium ethule kakhulu, yonke inokufikelela kwi-password; Ifulethi lilodwa, liphezulu, kodwa linegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlamba impahla kunye nebalcony eyahlukileyo kwezinye iindawo. Sinazo zonke izixhobo zasekhitshini, izixhobo zombane, iitawuli, isepha, ingubo, umqamelo, Wi-Fi, ibhedi. Ukucoceka nokulungelelana kusoloko kuyeyona nto siyixhalabeleyo. Zonke zicinga ngokhathalelo olugqithisileyo ukubakhonza ngcono !!! Nayiphi na imibuzo okanye naluphi na uncedo sikulungele ukunceda!
Indlu enkulu kwabo bafuna indawo ekufutshane nesikhululo seenqwelomoya, itofotofo, umntu ngamnye kunye nokufikelela ngokulula ekuThengweni, edolophini, kwimakethi, indawo yokuzivocavoca, indawo yokutya, indawo yokutyela, ijim, imarike, indawo yokubhaka, yonke le nto kunye neendawo ezingaphezulu kwimizuzu emi-5 ukusuka kwigumbi lokuhlala. .
Umbuki zindwendwe ngu- Anna Carolina
nangaliphi na ixesha ndifumaneka ngemibuzo nezisombululo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Águas Belas